Bujumbura tiswir wandaka brundi africa Doorsahyiinka
Bujumbura waa caasimada Burundi. Magaaladaan waxaa degan dad gaaraayo ilaa 497,166 oo qof (2008). Bujumbura (/ ˌbuːdʒəmbʊərə /; afka Faransiiska: [byʒœbyʁa]), (oo horay usocday Usumbura) waa caasimadda, magaalada ugu weyn, iyo dekedda weyn ee Burundi. Waxay maraakiibta badankeeda u dhoofisaa madax-furka, qaxwaha, iyo sidoo kale suuf iyo madow. Waxay ku taallaa xeebta waqooyi bari ee Lake Tanganyika, xeebta labaad ee dunida ugu weyn ka dib markii Lake Baikal. Xarunta magaalada waa magaalo gumeysi leh oo leh suuq weyn, garoon heer qaran ah, Masaajid weyn, iyo kaniisadda Archdiocese ee Bujumbura. Matxafyada magaalada waxaa ka mid ah Matxafka Matxafka Nolosha iyo Matxafka Cimilada ee Burundi. Waxyaabaha kale ee soo dhaweynaya waxaa ka mid ah Ruushka Qaranka Ruushka ee Ruushka National Park, Mitrere (Livingstone-Stanley Monument) ee Mugere (halkaas oo David Livingstone iyo Henry Morton Stanley booqday 14 maalmood kaddib markii kulankoodii ugu horeeyay ee taariikhiga ahaa ee Ujiji ee Tansaaniya), madaxweynaha madaxweynaha iyo ilaha koonfureed ee koonfurta Nile, oo lagu magacaabo maxaliga Nile.
Ferries ayaa ka imanaya Bujumbura ilaa Kigoma ee Tansaaniya. Magaaladu waxay ku taallaa Garoonka Caalamiga Bujumbura iyo Jaamacadda Burundi. Taariikhda Eeg sidoo kale: Waqtiga Bujumbura Bujumbura wuxuu ka soo baxay tuulo yaryar ka dib markii uu noqday gole ciidan oo ku yaal Bariga Afrika sannadkii 1889-kii. Kadib Dagaalkii Dunida ka dib waxaa loo sameeyay xarunta maamulka ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee Rwanda-Urundi. Magaca waxaa laga bedelay Usumbura ilaa Bujumbura markii Burundi uu madaxbannaanaa 1962-dii. Tan iyo markii madax-bannaanida, Bujumbura wuxuu ahaa goob dagaal oo isdaba joog ah oo u dhexeeya laba kooxood oo asal ahaan ka soo jeeda, iyada oo ay ku jiraan maleeshiyooyin Hutu ka soo horjeeda ciidamadii isdaba-joogga ahaa ee Burundi. Bujumbura maanta wuxuu u taagan yahay magaalo aan horumarineed laakiin wali waa uu sii wadi doonaa waddankeeda.
Mamnuucida qaawan ee 2014
Sida laga soo xigtay BBC, dadka reer Bujumbura waxaa loo yaqaan 'dhaqanka subaxnimadii Sabtida ee bilowday intii lagu jiray muddadii dheeraa ee colaadda qowmiyadda.' Sababtoo ah buuraha ku hareereysan waxay ku sugnaayeen dagaalyahanno hubeysan ka hor 2005-kii, shacabka Bujumbura "waxay isku dayi doonaan inay cabsi galiyaan cabsidooda iyo niyad-jabka iyo calaustrofobia, iyagoo marar badan ku jira koox." 
Bishii Maarso 2014, madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa mamnuucay budhcada, sababtoo ah "cabsi loo qabo in loo adeegsado daboolid loogu talagalay."  isla bishaas, taageerayaasha mucaaradka ah ayaa lagu xukumay xabsi daa'in si loogu isticmaalo " habka loo abaabulo "mudaaharaad sharcidarro ah oo soo jiidatay rabshad."  Juun 2014-kii oo ku yaal Bujumbura, "maamulka ayaa tan iyo markii ay xakameeyeen naadiyada qallafsan ee meelaha qaarkood .. Dhamaan isboortiga waa in ay hadda ka dhacaan sagaal barkood Bujumbura iyo meelo kale oo kubadda cagta loogu talagalay "
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bujumbura&oldid=209544"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Febraayo 2021, marka ee eheed 13:03.